Wasiirka Gaashaandhiga Somaliya oo gaaray Kismaayo – STAR FM SOMALIA
Wasiirka Gaashaandhiga Somaliya oo gaaray Kismaayo
Wararka inaga soo gaaraya Magaalada Kismaayo ee xarunta Gobolka Jubbada hoose, ayaa sheegaya in halkaasi uu gaaray wafdi uu hogaaminaayo Wasiirka Gaashaandhiga Somaliya.
Garoonka Diyaaradaha Magaalada Kismaayo, Wafdiga waxaa ku soo dhaweeyay Saraakiil ka tirsan ciidamada Xooga dalka Somaliya iyo kuwa Midowga Afrika Amisom.
Ujeedka uu u tagay Magaalada Kismaayo Wasiirka Gaashaandhiga ayaa lagu sheegay inay tahay arimo ku aadan sidii ciidamo ka tirsan Xooga dalka Somaliya uu tababar ugu soo xiri lahaa.
Wasiir Diini, ayaa inta uu joogo Magaalada Kismaayo wuxuu booqan doonaa Xeryaha ay ku jiraan ciidamada Xooga dalka Somaliya ee Magaalada Kismaayo ku sugan.
Ciidamo ka tirsan Xooga dalka Somaliya qaybta Jubbaland, ayaa muddooyinkii dambe waxaa tababar lagu siinaayay Magaalada Kismaayo.
Wasiirka Gaashaandhiga Somaliya ayaa maanta Madaxtooyada Kismaayo wuxuu kula kulmi doonaa Madaxda Maamulka Jubbaland.
C/llaahi Goodax Barre oo goor dhow ku guuleystay kursiga Aqalka Hoose
Guddoomiyaha degmada Jalalaqsi Maxamed Ganey oo lagu dhaawacay duleedka Jalalaqsi